Middlesbrough Oo Wakhti Dambe Niyad-jebisay Manchester City
HomeWararka MaantaMiddlesbrough Oo Wakhti Dambe Niyad-jebisay Manchester City
Gool wakhti dambe uu u dhaliyey Marten de Roon ayaa Middlesbrough u horseeday in ay barbar dhac la gasho Manchester City oo garoonkeeda joogtay, qaybtii horena gool uu hoggaanka ugu dhiibay Sergio Aguero.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Etihad Stadium ayaa waxa daqiiqaddii 43aad goolka la hormartay Manchester City, taas oo kubbad uu meel fog ka soo laagay De Bruyne uu shabaqa ku leexiyey Sergio Aguero, isku dayo badan oo ay sameeyeen ciyaartoyga tababare Pep na waxa ka diiday goolhaye Victor Valdes oo muujiyey in uu yahay halyey ay Barcelona ku khaldanayd in ay fasaxdo.
Middlesbrough oo kulankeedii hore barbar dhac goolal la’aan ah la gashay Arsenal, ayaa kulankanna ku dhamaysatay difaac, laakiin fursado muhiim ahna samaysay. Alvaro Negredo ayaa ku sigtay in uu goolka dhaliyo kaddib markii meel fog ka toogtay goolka City oo uu ka baxsanaa Claudio Bravo balse dirqi ku badbaadiyey.
Daqiiqaddii 91aad ee ciyaarta ayey natiijadu isbeddeshay markaas oo De Roon uu kooxdiisa Middlesbrough goolka barbar dhaca u dhaliyey markii uu madaxa la helay kubbad uu soo dhigay George Friend.
Ciyaartoygii labada kooxood u saftay
Team of the week: Kooxda Toddobaadka Ee Premier League
All Highlights: Arsenal 0-1 Tottenham – Premier League
Guushii PSG Oo Culayska Ka Dejisay Real Madrid iyo Jewi Farxadeed Oo U Bilaabmay
16/02/2018 Abdiwahab Ahmed